ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၃.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် မင်းဘူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ငွေ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် - မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၃.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် မင်းဘူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ငွေ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
၁။ အမည် – ဦးကျော်ငွေ
၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ။
၃။ လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၈/ မဘန(နိုင်) ၀၅၇၉၄၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ဆုပ် ၆ . ၃ . ၁၃၁၅ ၊ ( ၆၅ )နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကြီးပင်ကန်(၁)ရွာ၊ မင်းဘူးမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း – B. A ( History )
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)
၉။ အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင် – ဦးညွန့်မောင်၊ တောင်သူ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် SGU – ၀၄၇၃၆၄
လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ
၁၀။ အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်စိန်တင်၊ မှီခို
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၉၉၃၈၇
လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ
၁၁။ ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်စန်းတင်၊ မှီခို
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၅၇၈၀၈
လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
၁၂။ သား/သမီးအမည်/ အလုပ်အကိုင် – ကိုကျော်ဇင်ဦး(အရောင်းအဝယ်)၊ မခင်းနှင်းလတ်(စျေးသည်)၊ မခင်သန္တာကျော်(ဘဏ်ဝန်ထမ်း)၊ မဇင်မေကျော်(ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ – ကြီးပင်ကန်(၁)ရွာ၊မင်းဘူးမြို့နယ်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ ( ၉ .၁၁.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ ၄၀ / တဒသက- ပန (၅) / ကမရ အရ
← မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး အပြီးသတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ် →